Kuedzwa kweIVA | Yangu Mota Kunze
Pasi Pose VeMotokari Vanotora kunze IMPORT NYANZVI Yakazara IVA kuyedzwa Mota yako ichaenderana zvizere muUK 30 Makore Ekuziva Ruzivo, Nyanzvi uye Rinoshanda.
Isu tinogadzirisa yedu onsite IVA bvunzo chirongwa
Hapana nguva yekumirira yehurumende - isu tiri vega uye tinokwanisa kuendesa mota yako muIVA yayo nekukurumidza kupfuura chero kumwe kunhu.
Sezvo isu tiine yedu dzimba uye nekubatana neDVSA pane akati wandei mabhenefiti ayo akatotaurwa kare. Asi sevatungamiriri vanotungamira kuUnited Kingdom kwekutenga mota takapihwa kugona kuyedza mota pasite.
Izvi zvinoreva kuti mota yako haina kumbobvira yaenda kuenda kunzvimbo yehurumende kuti bvunzo dziitike uye tinodada nekugona kupa sevhisi kune vatengi vedu.
Nenzvimbo dzakatemerwa vhiki rega rega iwe unogona kutarisira kukurumidza kutendeuka nguva uye kuwanda kuchinjika kana nyaya ikasangana nemota dzako IVA bvunzo. Iko hakuna imwe kambani muUnited Kingdom iyo inogona kupa sevhisi senge iyo.
Chii chinonzi Yemumwe Mota Kubvumidzwa?
KUGADZIRA YAKO MOTO KUTEERESA YEMUK migwagwa
IVA inomiririra Yega Mota Kubvumidzwa uye inoenderana neRudzi Kubvumidzwa kwemotokari muUK. Type Kubvumidzwa ndiyo nzira inovimbisa kuti mota, masisitimu avo uye zvikamu, zvinosangana nemamiriro ekunze ezvekuchengetedza uye ekuchengetedza anoshandiswa muUK neEurope.
Kuti mota yako inyoreswe kuUK inofanirwa kuratidza kuti ine imwe mhando yeType Kubvumidzwa. Muchiitiko chetsva ruoko rwerudyi kutyaira mota dzakapihwa kune wako wemuno mutengesi ivo vanozopihwa nemugadziri nehukuru hweMhando Type Kubvumidzwa inonzi chitupa chekuenderana.
Kune vamwe vedu vangave vane mota yatiri kuunza kubva kunze kweEU kana mota yekuruboshwe yekutyaira, tinogona kushandisa iyo IVA bvunzo kuwana mhando mvumo yatinoda kunyoresa mota yedu.
Chii iwe chaunofanirwa kuziva nezvacho panguva yeIVA bvunzo?
Kuongorora kwacho uye kunoedzwa pamotokari
MuUnited Kingdom mota dzese dzinoda MOT kuratidza kuti mota 'nzira yakakodzera' uye yakachengeteka. Asi iyo IVA bvunzo inotarisa mota kubva kune imwe nzira maonero. Iyo chaiyo dhizaini yemotokari ndeye assesd yekuona kuti inosangana nemitemo iri munzvimbo mhiri kweEU.
Yakawanda yenguva iyo mota inoda muyedzo weIVA kana isina kuve yakashongedzwa mukati meEU uye haina zera kudarika makore gumi kungoti nekuti muEU CoC chiratidzo chekuti mota yatowirirana, ergo bvunzo yeIVA inogona kutadza. inodikanwa kunze kwekunge mota dzakagadzirwa neEU COC dzisingawanikwe.
Dare rinodzora rekuona kutevedza mota
Chiyero cheIVA chinoitwa neDriver uye Vehicle Standards Agency kuDVSA chiteshi chekuyedza kana DVSA yakatenderwa nzvimbo yakasarudzika senge yedu. Vashandi veDVSA vanoshanyira saiti yedu muvhiki rese uye vanoita ongororo kune vedu vatengi mota dzinoperekedzwa nemumwe weedu maIVA mahunyanzvi. Kuva nehunyanzvi ane ruzivo arikupa mota yako bvunzo chinhu chakanakira kuburitsa mota kuti uzviedze nekuti unowanzodikanwa kuratidza zvimwe zvikamu zvemotokari kumuongorori anogona kunge ari kumashure kwepaneru kana mune dzakaoma kusvika nzvimbo dzeinjini bay. Kana vagutsikana vanopa IVA zvitupa zvekupasa zvatinoshandisa kunyoresa mota yako neDVLA.
Mota yako ichagara ichida imwe nhanho yekushandurwa kuti uwane UK mhando yekubvumidzwa uye matekinoroji edu ane ruzivo rwekugadzirira mota yako kuIVA standard saka kana ichiongororwa tine chivimbo chekuti ichapfuura nguva dzese.
Tichabata mapepa ese ane chekuita nechikumbiro chako zvemagetsi nevatinosangana navo kuVOSA kuti usatambisa chero nguva kutumira mapepa nekudzoka kusvikira zvanyatsoitika.
Isu tinopa iyo yakazara yekunze sevhisi